फस्टाउँदैछन् लकडाउनमा खुलेका ‘टिफिन बक्स’ र ‘यमी’ « Loktantrapost
फस्टाउँदैछन् लकडाउनमा खुलेका ‘टिफिन बक्स’ र ‘यमी’
११ मंसिर २०७८, शनिबार ११:४४
झापा, ११ मङ्सिर (रासस) : कार्य व्यस्तताले चाहेजस्तो खाना खान रेस्टुरेन्ट जान नभ्याउनेहरुका लागि घर र अफिसमै तयारी खानेकुरा पुर्याइदिन झापामा खुलेका फुड डेलिभरी कम्पनीहरु लोकप्रिय हुन थालेका छन् ।
धेरै जनघनत्व भएको सहर विर्तामोड र मेचीनगरमा खुलेका त्यस्ता कम्पनीले मोवाइल एपको प्रयोग गरी अर्डर लिएर ग्राहककै रुचिको खानेकुरा घरदैलोमै पुर्याउने गर्छन् ।
मेचीनगर–१० का २८ वर्षीया प्रनित पुडासैनी र २४ वर्षीय सरोज खरेलले ड्रिम्स ग्रुुप अफ कम्पनी स्थापना गरेर विर्तामोडमा ‘टिफिन बक्स’ सेवा सुरु गरेका छन् ।
प्रनित पुडासैनी ।
अनलाइनमार्फत खानेकुराको अर्डर लिने गरेको ‘टिफिन बक्स’ले विर्तामोड र आसपासको १५० वटा संस्थासँग सम्झौता गरी नियमित खाना र खाजा पुर्याउने गरेको कम्पनीका निर्देशक पुडासैनीले जानकारी दिए ।
“बिर्तामोडको १० किलोमिटरको परिधिभित्र जहाँ पनि खानेकुरा पुर्याउन हाम्रा कर्मचारीहरु तयारी अवस्थामा हुन्छन्,” उनले भने–“सामाजिक सञ्जाल र मोवाइल एपबाट पनि ग्राहकहरुले अर्डर आउँछ ।”
फुड डेलिभरि कम्पनी सुरु गर्नु अघि उनी मिडिया र मोडलिङ क्षेत्रमा काम गर्दथे । झापाको सूर्योदय टेलिभिजनमा समाचार बाचक भएर लामो अवधि पत्रकारिता गरेका उनले जिल्लामा दर्जनौ ‘ट्यालेन्ट शो’ प्रतियोगिताको आयोजना समेत गरे ।
“कोभिड–१९ को महामारीका कारण लामो अवधिसम्म बन्दाबन्दी हुँदा मोडलिङ र मिडियामा नराम्रो असर पर्यो,” पुडासैनीले फुड डेलिभरी व्यवसाय सुरु गर्नुको कारण बताउँदै भने–“बन्दाबन्दीमा खुल्नै पर्ने बैंक, वित्तीय संस्था, अस्पताल लगायतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दिवाकालीन खाजा खान कठिनाई भएको देखे । त्यसपछि फुड डेलिभरीको व्यापार चल्ने सोच पलायो ।”
आफ्नै भान्सा घर समेत चलाउँदै आएको ‘टिफिन बक्स’ले रु. ६० देखि एक हजारसम्म पर्ने २५० प्रकारका खानेकुराका परिकार ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । दश किलोमिटर वरपर सामान पुर्याउँदा सेवा शुल्क नलाग्ने तर त्यसभन्दा टाढा लैजाँदा प्रति किलोमिटर रु. १० का दरले सेवा शुल्क लिने गरेको उहाँले बताए ।
मानिसहरु टिफिन बक्समा घरबाट खाजा बोकेर कार्यालय जाने पुरानो चलनलाई पछ्याउँदै कम्पनीको नामाकरण ‘टिफिन बक्स’ राखिएको उनको भनाई छ ।
अन्सुल बंशल ।
‘टिफिन बक्स’ जस्ते ‘यमी’ नामको कम्पनी झापामा फुड डेलिभरी व्यवसायमा लोकप्रिय बनिरहेको छ । भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीबाट बिजनेस मेनेजमेन्टमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका २२ वर्षीय अन्सुल बंशलको नविनतम् व्यावसायिक सोचको उपज हो ‘यमी’ ।
मेचीनगर–१० धुलावारीका बंशलले पनि बन्दाबन्दीको बेलामा सर्वसाधारणले मनलाग्दी खानेकुरा खान रेस्टुरेन्ट जान नसकेको देखे । कोरोनाको डरले मानिसहरु घर बाहिर निस्कन डराउँथे । तर मीठो खाजाको सम्झना त आइहाल्थ्यो । आफुले विदेशमा घर र कार्यालय बसेरै खानेकुराको अर्डर गर्न सकिने चलन देखेको हुँदा बंशलमा स्वदेशमै त्यस्तै नयाँ काम गर्ने हुटहुटी जाग्यो । जसका कारण ‘यमी’को जन्म भएको उनले सुनाए ।
फुड डेलिभरीको व्यवसाय एक्लै गर्न सम्भव नदेखेर उनले साइक्लिस्ट साथी धनराज थापासँग मिलेर यमी फुड्स डेलिभरि सर्भिस् नामक कम्पनी सञ्चालन सुरु गरे । जसले अहिले विर्तामोडलाई केन्द्र बनाएर झापा जिल्लाभरि आफ्नो व्यापार विस्तार गरिसकेको छ ।
“अहिलेसम्म हामी झापामा सीमित छौं, तर छिट्टै यसलाई विस्तार गरेर प्रदेश नं. १ भरि पुर्याउने योजना गरिरहेका छौं,” यमीका सञ्चालक बंशलले भने–“आजका युवा पुस्ताको चाहना र प्रविधिले दिएको सुविधालाई हामीले संयोजन गरेर व्यवसायलाई अघि बढाउन सक्यौं ।” यस्तो व्यवसाय सञ्चालनमा सामाजिक सञ्जाल र मोवाइल एपले मदत गरेको उनले बताए ।
‘यमी’ले झापामा रहेका प्रसिद्ध रेस्टुरेन्टहरुमा पाकेको खाजा उपभोक्तासमक्ष ताजै पुर्याउने गरेको छ । मूल्य पनि रेस्टुरेन्टकै हुने बताइएको छ । दूरी अनुसार रु. ३० देखि रु. १०० सम्म सेवा शुल्क लिने गरिएको उनले जानकारी दिए । पहिलो डेलिभरिमा जुनसुकै सामान मगाए पनि सेवा शुल्क नलिने र जन्मदिनको केक अर्डर गर्दा सेवा शुल्क नलिने यमीको अफर छ ।
एप डेभलपमेन्ट, डेलिभरी, मार्केटिङ र डिजाइनर गरी २५ जना युवाको टिमले ‘यमी’मा काम गरिरहेको छ । पिज्जा, बर्गर, जन्म दिनको केक, पाउँभाजी, पान, चिसो पेय पदार्थ लगायत शुद्ध भेज आइटमका खानेकुरा ‘यमी’ले ग्राहकलाई पुर्याउने गरेको छ ।
फेसबुक पेजमा परिकार र अफरका बारेमा विस्तृत जानकारी राखेर सेवा प्रदायक यस्ता कम्पनीहरुले ग्राहकलाई छनौटको अवसर पनि दिने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल चलाउने पुस्ता फुड डेलिभरी सेवाप्रति आकर्षित रहेको र प्रतिक्रियाहरु सकारात्मक आइरहेको ‘यमी’का सञ्चालक बंशलले बताए ।